တရားမဝင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသတိပေးတဲ့သူ Neo-နာဇီကိုခေါ်ပါပလော Echenique Robba, Podemos ၏အတွင်းရေးမှူး
30, ဇွန်လ 2018 Belz 86
Echenique အခိုင်အမာ၏ demagogy နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်ပါပလော Echenique Robba, နိုင်ငံရေးအစွမ်းသတ္တိ၏သိပ္ပံနည်းကျနှင့်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရေးမှူး Neo-နာဇီ '' အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. သတိပေးခဲ့သူစပိန်ကိုခေါ်နိုင်ပါတယ်မှတုန့်ပြန် [ ... ]
ဥရောပစီးနင်းအဆိုပါ "Trojan horse" အာဖရိကန်
30, ဇွန်လ 2018 Belz 27
ဒါဟာမပါဘဲ "Trojan" အဖြစ်လူသိများနေတဲ့ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့်အတူ 12 နှင့် 20 အကြားလူငယ်များရိုးရှင်းစွာ "Trojan horse" ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုမသိကြောင်းအရှိဆုံးပါးရည်နပ်ရည်တွဲဖက်အလွန်ကံဆိုးဖြစ်ပါသည် [ ... ]
စပိန်လျှပ်စစ်မီးဥပဒေကြမ်း: နှစ်ခုနီးပါးသန်းအိမ်ထောင်စုပေါင်း 2018 အတွက်လူမှုရေးနှောင်ကြိုးဆုံးရှုံးနိုင်
29, ဇွန်လ 2018 Belz 1
လျှပ်စစ်စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုကြသော၏ model အသစ်ကြိုဆိုအိမ်ပြန်မပါလျှင်နီးပါးနှစ်ခုသန်းစပိန်နေအိမ်များအောက်တိုဘာလ 2018 လူမှုရေးဆုကြေးငွေအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ တို့ကမလုံလောကျသွာကြောင်းသတင်းများ [ ... ]
28, ဇွန်လ 2018 Belz 2
ကပေါက်ရှိရာတခြားသူတွေကိုတခြားနေရာမွေးဖွားစဉ်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်ဖြစ်ခြင်း, မသိဘဲနဲ့မေ့လျော့နေတဲ့စပွန်ဆာမရှိဘဲပြစ်ဒဏ်မရှိတော့, တင်ပြဘယ်တော့မှအခွင့်အလမ်းများကိုကတိပြုနှင့် [ ... ]
25, ဇွန်လ 2018 Belz 0
အမြင်ပရိသတ်ကိုအသိအမှတ်ပြုထားနှငျ့သငျမှရတဲ့ပိုပိုကောင်းမသိဘို့ငါတို့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဆန္ဒပြနေသော။ ကျနော်တို့၏ဆိုက်ရောက်ယူဆထားတဲ့စပိန်အတွက်ရိုးရာနွေရာသီအားလပ်ရက်ကိုစတင်ပါတော့မည် [ ... ]
Vigo မြို့၌ Castrelos ဟေးလ်လူသိများနေတဲ့အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး 300 နေထိုင်သူများ, ကိုလိုက်နာနိုင်ပါလိမ့်နှင့်ရှောက်သွားသည့်ဒုက္ခဆင်းရဲပြီးနောက်၎င်းတို့၏နေအိမ်များ၏ဖြိုဖျက်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေမဟုတ် [ ... ]
Pascal သတိပေးခဲ့သည်: အပိုဖိအားပေါက်ကွဲမှု သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်နိုင်သည်စွပ်စွဲနေသည်
16 အောက်တိုဘာလ, 2018 0
တူနှင့်တောက်ပသောလူတစ်ဦးဆက်လက်တည်ရှိနှစ်ခု Pascal, ဆန္ဒပြပွဲနှင့်နှစ်ဦး၏ဘယ်ဟာသင်ကြိုက်တတ်တဲ့ပါဘူးကြုံတွေ့နေကြရသည်ဒီလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီကွဲပြားခြားနားသောရှိပါသလဲ အဲဒီမှာ [ ... ]